Yakha i-drone eyenziwe ekhaya ngebhodi le-Arduino nephrinta ye-3D | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
UJoaquin Garcia Cobo | | I-Arduino, drones
Ngebhodi le-Arduino noma ibhodi le-Raspberry ungakha noma iyiphi igajethi. Akukho kungabaza ngalokhu, kepha kuze kube namuhla, bambalwa abenzi abakwazile ukwakha i-drone endizayo nebhodi le-Arduino.
Osemusha okuthiwa UNikodem Bartnik udale i-drone eyenziwe ekhaya endizayo, idivayisi yendiza elawulwa yibhodi le-Arduino, kulokhu imodeli ye-MPU-6050. I-quadcoptero iyimodeli esebenza futhi iyimodeli esingayiphinda noma kunini.
UNikodem Bartnik usebenzise iphrinta yakhe ye-3D ukwakha isakhiwo i-flying drone ezoba nayo. Kulesi sakhiwo wengeze ophephela, izinjini, ibhethri elishajekayo kanye nebhodi le-Arduino MPU-6050. Ibhodi le-MPU-6050 beliphethe ukulawula konke ukusebenza kwe-drone endizayo kanye xhuma kurimothi okwenziwe nguBartnik ukulawula indiza.
UNikodem Bartnik udale i-drone eyenziwe ekhaya ngenxa yama-Atmega chips nephrinta ye-3D
Njengoba ubona, izingxenye zale drone zishibhile futhi kulula ukuzithola. Futhi nokuningi uma sinephrinta ye-3D endlini yethu. Kodwa-ke, into enjalo ayibonakali ilula kakhulu ngaphandle kwekhodi yohlelo. Kungakho ikhasi le-Instructables lephrojekthi libaluleke kakhulu.
UBartnik ushicilele wonke umsebenzi ku ikhasi le-Instructables ngakho-ke noma imuphi umsebenzisi angasebenzisa umhlahlandlela ukuzakhela eyabo i-flying drone. Kuwebhu asizukuthola kuphela isoftware nohlu oluphelele lwezinto kodwa futhi amafayela wokuphrinta esingawasebenzisa mahhala futhi mahhala.
Le phrojekthi isadinga ukuthuthuka okuningi ukuyenza isebenze njengama-drones ochwepheshe, kepha ngaphandle kokungabaza iphrojekthi ethokozisayo ukubhekela izidingo eziyisisekelo, okungukuthi, ukuba ne-drone eyisisekelo endizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Yakha i-drone eyenziwe ekhaya ngebhodi le-Arduino nephrinta ye-3D